ONYE NNỌCHITE ANYA POOPU ETOOLA UGWUANYỊ – hoo!haa!!
Ọnụ na-ekwuru onye isi ụka Katọlik n’ebo niile nke ụwa, ngalaba nke Naijiria bụ Achịbishọp Antonịọ Guido Filipazzi etoola aka na-achị steeti Enugwu bụ Ifeanyị Ugwuanuị maka ọchịchị ya nke kwesịrị nñomi nakwa ịtụ egwu Chineke ya nke mere na-enwere udo tọrọ atọ na steeti ahụ.
Onye nnọchi anya poopu a jiri asụsụ oyibo kwue okwu mgbe ya na ndi ya na ha so, gara kpọtụrụ aka na-achị steeti Enugwu n’obi gọọmenti dị n’Enugwu. Ndi ya na ha soro gaa njem a gụnyere otu nnukwu ụkọchukwu Kadinal, ndi nnukwu ụkọchukwu Achịbishọp, ndi nnukwu ụkọchukwu Bishọp nakwa ndi ụkọchukwu ndi ọzọ.
Ndi ọrụ Chineke ndi a biara steeti Enugwu maka echichi nke nnukwu ụkọchukwu bishọp enyemaka nke dayọsis ụka Katọlik Enugwu bụ Bishọp Enest Obodo. Anọrọ n’ụlọ ụka Katọlik Pọọl dị asọ dị n’Ọzalla, n’okpuru ọchịchị ime obodo ọdịda anyanwụ Nkanụ mee emume ochichi nnukwu ụkọchukwu a.
Onye ọchịchị Enugwu a jikwa obi sara mbara labata nnukwu ụkọchukwu a. Ọ kọwara Ugwuanyị ihe bụ isi njem ha n’Enugwu ma tokwa onye ọchịchị ahụ na mbọ ya n’ikwalite ụka nakwa ka o si achịkwa ndi Enugwu na-akpaghị oke dịka o si gbasata okpukpere chi, agbụrụ maọbụ steeti onye si.
Onye nnọchite anya a kpọrọ Ugwuanyị “ezigbo onye ọchịchị” nakwa “nna nke ezinụlọ”. Ọ sị na ezigbo ọchịchị Ugwuanyị na steeti Enugwu kpaliri mụọ ya. Achịbishọp Fillipazi gosiputara obi añụrị ya maka ezigbo mmekọrita dị n’etiti onye ọchịchị a nakwa Bishọp nke ụka Katọlik n’Enugwu bụ Kalistus Ọnaga. Ọ gara n’ihu kwue na ochichi nke echiri onye bishọp enyem aka nke mbụ na dayọsis Enugwu ga-akwalite ọrụ ụka na steeti Enugwu.
N’okwe ozi ekele ya, Ugwuanyị, kelere Chineke, maka emume ochichi nnukwu ụkọchukwu bụ Obodo ma kelekwa Poopu Fansis ka o si hụta Bishọp Obodo dịka onye kwesịrị mbuli n’ọkwa a dị elu.
Onye ọchịchị a gosiputara obi añụrị ya ṅịnabata onye nnọchi anya a nakwa ndi ya na ha so bịa, ma kọwaa emume nke ochichi nnukwu ụkọchukwu a dịka otu n’ime ihe nnukwu ọrụ otito megoro na steeti Enugwu. Ọ sị na nke a bụ n’ihi na ọbụ ihe gbasara naanị Chukwu.
Previous Post: DELTA: NDI NCHỊ EHI AGBAGBUELA NWA DIBIA OYIBO
Next Post: DELTA: ỤLỌ ỤKA ADADOLA NDI ỤKA.